Electricity နဲ့ မီးပျက်တဲ့ ပြဿနာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » Electricity နဲ့ မီးပျက်တဲ့ ပြဿနာ
Electricity နဲ့ မီးပျက်တဲ့ ပြဿနာ
Posted by Zaw Wonna on Nov 29, 2010 in Drama, Essays.. | 12 comments
ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ နွေဘက်ရောက်လာပြီဆိုရင် မီးပျက်တဲ့ကိစ္စက လာတော့မယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ မိုးကုန်တာနဲ့ လျှပ်စစ်မီးက အလှည့်ကျစံနစ် ဖြစ်သွားပြီ။ ဒီလောက်ကိုတော့ ကျုပ်တို့ ရွှေမြန်မာတွေက မီးပျက်တယ် လို့တောင် ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။ မီးမှန်တယ်လို့ပဲ ခေါ်တယ်။ မီးပျက်တယ်ဆိုတာ မီးလာရမယ့် အချိန်မှာ မလာတာမျိုးကို ခေါ်တာကိုး။ လျှပ်စစ်မီး ဆိုတာကလည်း နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝအတွက် အရေးအပါဆုံးလောက်မှာကို ရှိတာဆိုတော့ မီးပျက်လို့ ဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ပြောပြရရင် ကုန်နိုင်ဖွယ်ပါပဲ။ ထမင်းအိုး ပျက်ရတဲ့ ကိစ္စကနေ ဘုရားဝတ်ပြုနေတုန်း မီးပျက်လို့ ကျိန်ဆဲမိရတဲ့ အထိ။
ထားပါတော့လေ။ ကျုပ်ပြောချင်တာက နှစ်စဉ် မီးပျက်တဲ့ဒုက္ခကို ဘယ်လို ရှောင်ရှားနိုင်မလဲ ဆိုတာပါ။ တာဝန်ရှိသူများ ဆိုသူတွေကလည်း လုပ်ကြပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ခဲ့၊ ဆောက်လုပ်ဆဲ၊ ဆောက်လုပ်လတ္တံ့သော ရေအား၊ လေအား၊ နေအား၊ ဂက်စ်အား နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဲ … ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ် လိုအပ်ချက်ကလည်း တနေ့တခြား တိုးလို့သာ လာနေပါတယ်။ လုံလောက်တယ်ရယ်လို့ကို မရှိပါဘူး။
အခု ကျုပ်စဉ်းစားမိတာက လျှပ်စစ်အားကို တစ်ဦးချင်း အနေနဲ့ ဘယ်လို ချွေတာရင် ကောင်းမလဲ ဆိုတာပါ။ ကြီးလာတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ဖိနပ်က မတော်တဲ့အတွက် ခြေဖနောင့်ကို ဖြတ်ပစ်ရမဲ့ သဘောဆိုရင်လည်း ဆိုပါတော့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မီးအား သုံးစွဲမှု အများဆုံးက လျှပ်စစ်မီးဖို (hot plate)တွေပါ။ တစ်လုံးကို ဝပ် ၁၈၀ဝ လောက်ရှိပါတယ်။ တီဗွီ၊ အောက်စက်၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ပန်ကာ နဲ့ မီးချောင်း သုံးလေးချောင်းလောက် သုံးတဲ့ သာမန် အိမ်တလုံးရဲ့ လျှပ်စစ်အား သုံးစွဲမှုထက်တောင် ပိုနေပါသေးတယ်။ ကျုပ် ထိုင်းနဲ့ မလေးရှားကို ရောက်တော့ သူတို့ဆီမှာ လျှပ်စစ်မီးဖိုသုံးတာ မတွေ့ရပါ။ ဂက်စ်မီးဖိုက ပိုတွက်ခြေကိုက်လို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ဆီမှာလည်း ဂက်စ်ကို ခြွေတာသုံးပြီး လျှပ်စစ်မီးဖိုကို မသုံးပဲ ထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
လေအေးပေးစက်တွေ တပ်ဆင်တဲ့ အခါမှာလည်း သေချာတွက်ချက်ပြီး တပ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ လေယိုပေါက် (air leakage) တွေ ရှိတဲ့ အခန်းမျိုးတွေမှာ တပ်ဆင်တာမျိုး၊ မလိုအပ်ပဲ ပိုတပ်ထားတာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ရေစုပ်မော်တာတွေ။ မီးလာပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ တစ်ရပ်ကွက်လုံးကို ဆူညံနေအောင် အားပေးကြတော့တာပဲ။ အမှန်တော့ အထပ်မြင့် တိုက်တွေမှာဆိုရင် တိုက်ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ရေကန်ထားပြီး မော်တာ တစ်လုံးတည်းနဲ့ တင်လို့ ရရဲ့သားနဲ့။ အဲဒါဆို မီးဘေး ကာကွယ်ရေးအတွက် အစီအစဉ်တွေတောင် လုပ်ထားလို့ ရတယ်။ အခုတော့ မော်တာကြီးတစ်လုံး သုံးရမဲ့ နေရာမှာ မော်တာအသေး ၁၆ လုံးလောက် သုံးနေရတယ်။ ဖြစ်သင့်တာကတော့ မြို့အတွက် ပေးဝေမဲ့ ရေကို အမြင့်မှာ တင်ထားပြီးမှ လွှတ်ချတာက အကောင်းဆုံးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါမျိုးကလည်း ဆောက်ဖြစ်မှ ကျောင်းဒကာဆိုတော့။
နောက်လူသုံးများတာ တစ်ခုက မီးလုံးတွေပါ။ ဝပ် ၄၀၊ ၆၀၊ ၁၀ဝ အား ရှိတဲ့ မီးလုံးတွေပေါ့။ အဲဒီ မီးလုံးတွေ အစား မီးချောင်းတွေ၊ LED မီးလုံးတွေ ပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။ ဝပ် ၁၀ဝ အား မီးလုံးတစ်လုံး သုံးစွဲတဲ့ လျှပ်စစ်အားဟာ ၂ ပေ မီးချောင်း ၅ ချောင်း ထွန်းလို့ ရပါတယ်။ တရုပ်ပြည်တောင် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လမ်းမီးတွေနေရာမှာ LED မီးသီးတွေကို ပြောင်းလဲမယ်လို့ ဟိုတလောက ကြားမိပါတယ်။ အတုယူစရာပါပဲ။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ အနေနဲ့ကတော့ နောက်ထွက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေက အရင်ကဟာတွေနဲ့စာရင် လျှပ်စစ်အား သုံးစွဲမှု တော်တော် သက်သာလာပါတယ်။ ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်း ဒါကို ထည့်စဉ်းစား လာကြတာကိုး။ အရင်က တီဗွီကြီးတွေ၊ CRT မော်နီတာကြီးတွေနဲ့ စာလိုက်ရင် အခု LCD တီဗွီတွေ၊ မော်နီတာတွေက လျှပ်စစ်အစား သက်သာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ချွေတာရေးအတွက် နောက်ဆုံးပေါ် တွေကိုသာ သုံးပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။ လိုအပ်တဲ့ ငွေအတွက်ကတော့ မပူပါနဲ့၊ မန္တလေးဂေဇက်မှာ တစ်နေ့ စာအပုဒ် တစ်ရာလောက် မှန်မှန်လေး ရေးသွားရင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်၊ တိုကျို၊ ပဲရစ်၊ ဘန်ကောက်၊ နယူးယောက်၊ မော်စကို စတဲ့ နိုင်ငံခြားက မိတ်ဆွေများရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဝိုင်းဝန်း အကြံပေး ဆွေးနွေးကြဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ။
ဒီပြသနာကတော့ ဆွေးနွေးရခက်လိမ့်မယ် … တရုတ်ပြည်ကတော့ LED မီးသီးတွေ ပြောင်းလဲသုံးနေပါပြီ .. နောက်တစ်ခု မီးချွေတာကတော့ လှေကားမီးနဲ့ ဝရန်တာမီးတွေကို အသံနဲ့ အော်တိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တဲ့ စနစ်ကိုသုံးပါတယ် … မီးဖိုကိုကလဲ အိမ်အများစုမှာ ဂက်စ်လိုင်းသွယ်ပြီး သုံးပါတယ် .. မီတာခထက် ပိုသက်သာတယ်လို့ သိရပါတယ် …
ဗမာပြည်မှာကတော့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေက ဈေးကြီးတော့ အဟောင်းတွေဝယ်သုံးတော့ မီတာစားတယ် … ဂက်စ်ကလဲ ဝယ်ရခက်ပါတယ် …
Phone တွေဈေးကောင်းတုန်း တစ်လုံး US$5000 လောက်တုန်းက ဘယ်သူတွေပျော်နေတယ်ထင်ပါသလဲ?
(နောက်တစ်ဆင့်တက် စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် … ဘယ်သူတွေ ကဖန်တီးနေခဲ့ သလဲဆိုတာ….)
လောင်စာဆီတွေရှားပါးတုန်းက တစ်ဂါလံ ၅၀၀၀/ ၆၀၀ဝ ဖြစ်တုန်းက ဘယ်သူတွေပျော်တယ်ထင်ပါသလဲ?
ဖြေနိုင်မယ့်သူ post တင်သင့်ပါတယ်။
အရင်းစစ်တော့ အမြစ်မြေက ဆိုသလို ပြသနာရဲ့ အရင်းခံကို မသိမဟုတ်၊ ကလေးကအစ သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တတ်နို်င်တဲ့ ဘက်ကနေ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရင် ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစားမိတဲ့ သဘောပါ။
ပုဇွန်စိတ်ခေါင်းမှာလည်း ချီးတွေက စုလှပြီ မဟုတ်လားဗျ။
ကိုရီးယား မှာ တော့
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း တွေအတွက်ဆိုရင် သက်သာဆုံးမီတာခနဲ့ သုံးစွဲခွင့် ကို အစိုးရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်
ဒုတိယ အသက်သာဆုံးက စက်မှူ လုပ်ငန်း သုံးပါ
အိမ်သုံး ရုံးသုံး အတွက် က ဈေးကြီးဆုံးပါပဲ
အဲဒီမှာမှ တစ်လ ကို ကိုယ်ဘယ်လောက်သုံးမယ် ဆို ပြီး မီတာ ကြိုလျှောတ်ရပါတယ်
ဥပမာ တလ တစ်ကီလိုဝပ်ပဲ သုံးမယ် ဆို တစ်ကီလိုဝပ် တန် လာတပ်ပေး ပါတယ် မီတာခလဲသက်သာပါတယ် အဲ တစ်ကီလိုဝပ် ကျော်အောင်သုံးမိလို့က တော့ တ ယူနစ် ကို ပုံမှန်ထက် ၃ဆ လောက် ပိုကျပါတယ်
အဲဒီတော့ လစဉ် တစ်ကီလိုဝပ်ပဲသုံးပေမဲ့ စိတ်ချရအောင် နှစ်ကီလိုဝပ် တန် လျှောတ်ထားမယ်ဆိုရင်
တစ်ကီလိုဝပ် ရဲ့မီတာခထက် နှစ်ကီလိုဝပ် ရဲ့ မီတာခက ပိုဈေးကြီးတဲ့ အတွက် တစ်ကီလိုဝပ်ပဲသုံး ဖြစ်ရင်မတန်ပါဘူး
အဲဒီ တော့ ကိုယ်သုံး သလောက် တိုင်းပြီး လျှောက် ရပါတယ်
ကိုယ် လျှောက်ထားသလောက် နဲ့ လောက်အောင် သုံး ရပါတယ်
အဲဒီတော့ အော်တိုမစ်တစ် စည်းကမ်းရှိ သွားပါတယ်
စည်းကမ်း မဲ့မိတဲ့ လကျရင် မီတာခစာရွက်ကိုင်ပြီးခေါင်းငိုက်စိုက် နဲ့ နောင်တရနေရပါလိမ့်မယ်
အဲဒီစံနစ် မဆိုးဘူးဗျ။ မီးပေးရမဲ့သူ ဘက်ကလည်း estimate လုပ်လို့ ရတာပေါ့ဗျာ။
အဲဒီအစား gass ကလေးနဲ့ချက်ရရင်လျှပ်စစ်လဲ
သို့သော် gass ရရှိရေးကို ဘယ်သူတာဝန်ယူပါ့
နေရာတွေပါ သူတို့လဲ gass နဲ့မုန့်ဖုတ်ရရင်ကြိုက်
ပါသတဲ့ ဒါပေသိ gass ရဖို့ကသိတဲ့အတိုင်းဆိုတော့
ဒီမီးကောင်းကောင်းမရတာကတော့ ပေးတဲ့သူရော သုံးတဲ့သူမှာပါ အပြစ်မကင်းဘူးဗျာ။
၁) စွမ်းအင်နဲ့ပါတ်သက်တာတွေကို .. ပုဂ်ဂလိကလက်ထဲ အပ်လုပ်ခိုင်းရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကြီးလွန်းလို ့မနိုင်နိုင်တာမို ့.. ရပ်ကွက်၊မြို ့နယ်အလိုက် လုပ်နိုင်သူတွေလွှဲပေးလိုက်ပြီးတာပါပဲ.။
အဲဒါဆို .. ဂျင်နရေတာတွေ တအိပ်တလုံးလှည့်နေတာတွေလည် းပျောက်သွားပြီး .. အပိုနိုင်ငံခြားငွေတွေ။ ဆီတွေ။နေရာတွေ အချိန်တွေ အများကြီးထွက်လာမှာပါပဲ..။
၂) မီတာခကို ဈေးကွက်လိုအပ်မှုအရ အလိုက်သင့်မြှင့်ရမှာပဲထင်ပါတယ်..။
ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ ပေးသုံးကြပေမပေါ့..။ ဟော့ပလိပ် ၁ဝခုတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားလည်း ..ငွေပေးနိုင်လုပ်ပေါ့..။
လုံးဝကို မတတ်နိုင်သူတွေအတွက် .. အစိုးရက ..မီတာခကိုဝင်ငွေနည်းအထူးနှုန်းထားပြီး ..ကန့်သတ်ပေးသုံးပေါ့..။ အလုပ်လဲမလုပ်.. ပုံမှန်ဝင်ငွေလည်းမရှာ … အလကားဈေးပေါပေါနဲ့သုံးချင်လို့တော့ မရဘူးပေါ့..။
ဒါမှ..လူတွေအလုပ်လုပ်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်မှာမို ့ဖြစ်ပါတယ်..။
ကိုခိုင်ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် အစိုးရအနေနဲ့ စက်သုံးဆီနဲ့ လည်ပတ်ရတဲ့ မီးအားပေးစက်တွေက အရှုံးပေါ်နေသတဲ့ဗျ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီမှာလုပ်တဲ့ သာမန်ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်က တစ်ရက်ကို သောင်းဂဏန်းလောက် အောက်ဆိုက်ရှိတယ်ဆိုပဲ။ မီး သုံးစွဲသူတွေ မီတာခိုးသုံးတာတွေကိုလည်း မကြပ်မတ်နိုင်တော့ ခက်တယ်ဗျာ။ ကျနော် စက်မှုဇုံမှာ တွေ့တာကတော့ သိန်းဂဏန်းလောက် မီတာခ ဆောင်ရမယ့် စက်ရုံတွေက မီးရုံးက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ညှိပြီး မသမာ လုပ်ကြတာပဲဗျာ။ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဘက်ကလည်း လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ကဏ္ဍကို ဘယ်တော့မှ မလွှဲဘူးလို့ ကြားတယ်ဗျ။
အင်း ဒီပို့စ်ကတော့ စဉ်းစားစရာတွေကို တော်တော်လေး ပေးသွားပြီ။
အမှန်ကတော့ လျျှပ်စစ်အားသုံးစွဲမှုသက်သာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို သုံးနိုင်ရင်ကောင်းပါတယ်။
အင်း.. ရဲရွာရေအားလျှက်စစ်ကလဲ ကျွန်တော်တို့ ၈ တန်းလောက်ကတည်းကိုက လုပ်လာတာ အခုထိမပြီးသေးဘူး.. တာဘိုင်တွေ မကောင်းလို့လား.. ဘာတွေပဲဖြစ်နေလဲမသိဘူး.. ရေအားလျှက်စစ်စီမံကိန်းတွေက လုပ်တိုင်းလဲ မကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်… သစ်တောတွေပြုန်းတီးမယ်.. မြစ်ချောင်းတွေ ပျက်စီးမယ်.. ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်း ချွေတာသုံးသင့်တယ်ထင်တယ်ဗျ.. ကျွန်တော့် အသိအိမ်မှာဆို Hot Plate တွေ သုံးတယ်.. Hot Plate ချင်းတူရင်တောင် ဟိုတုန်းက Hot Plate တွေက တော်တော်ကို မီးအားဆွဲတာ.. ဖွင့်လိုက်ရင် မီးချောင်းတွေတောင် မှိန်သွားတာ..
နောက်ပေါ်တဲ့ Hot Plate တွေကတော့ တော်တော်ကို မီးအားချွေတာပြီးထုတ်ထားကြပါတယ်.. ဒီတော့ Gas သုံးဖို့အစဉ်မပြေတဲ့သူများ.. နောက်ပေါ်တဲ့ Hot Plate တွေကိုပဲသုံးကြပေါ့..